Dabley weerartay garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo – Radio Daljir
Dabley weerartay garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo
Galkacyo,Feb 21 -Maleeshiyaad hubaysan oo ku sugan koonfurta magaalada Gaalkacyo ayaa maanta weeraro qorayaha culus loo adeegsaday kusoo qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo.
Taliyaha qaybta booliska ee gobolka Mudug Jaamac Maxamed Axmed oo waraysi siiyay Radio Daljir ayaa waxaa uu sheegay ciidamada booliska ee dowladda Puntland inay sameynayaan baaritaano la xiriirta dadkii ka dambeeyay weerarka.
“Waanu ogaanaynaa wixii soo riday waxaas,waxa soo ridayna waa wax la dagaalsan maamulka Puntland,diyaaraduhu waxa ay ku dagayeen Airport International ah,waa diyaarado caalami ah waa diyaarado rakaab ah in la iska isticmaalo maahan hub waawayn”ayuu yiri taliyaha qaybta booliska ee gobolka Mudug.
Taliyaha ayaa waxaa uu sidoo kale tilmaamay ciidamada amniga dowladda Puntland ee garoonka Gaalkacyo inaysan wax jawaab ah ka bixin weerarka lagu soo qaaday garoonka maadaama uu sheegay dowladda Puntland inay tahay dowlad,islamar ahaanaatana loo baahnayn inuu jawaab siiyo maleeshiyaad.
Weerarada madaafiicda ah ee lagu soo qaaday maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo ayaan ahayn markii ugu horaysay oo uu falkan oo kale uu dhaco,hase ahaatee weerarada maanta garoonka lagu soo qaaday ayaan gaysan wax khasaare ah.